မင်းပြားမြို့နယ်တွင် ရိုဟင်ဂျာလူမျိုး(၆)ဦး အသတ်ခံရ | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
မင်းပြားမြို့နယ်တွင် ရိုဟင်ဂျာလူမျိုး(၆)ဦး အသတ်ခံရ
ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄၊ ၂၀၁၃
မင်းပြား ။ ။ ရခိုင်ပြည်နယ် မင်းပြားမြို့နယ်မှ ပေါက်တောမြို့နယ်သို့ ၉.၂.၂၀၁၃ တွင် ဈေးဝယ်ရန်ထွက်ခွာသွားသော ရိုဟင်ဂျာ(၆)ဦးသည် ၁၁.၂.၂၀၁၃ နေ့တွင် စက်ကဲပြင်ကျေးရွာ အနီး၌ ရခိုင် အကြမ်းဖက် သမား တစ်စု၏ အကြမ်းဖက် သတ်ဖြတ်ခြင်းခံရကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ဖြစ်ပွားပုံမှာ ၂၀၁၂ ခု အောက်တိုဘာလက ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော ဒုတိယအကြိမ် အကြမ်းဖက်မှုများကြောင့် မင်းပြားမြို့နယ်ရှိ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးများ အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဘဝသို့ ရောက်ရှိသွားပြီး ဘက် ပေါင်းစုံ တွင် ဒုက္ခမျိုးစုံနှင့်ကြုံတွေ့နေရသည့် အပြင် စားနပ်ရိက္ခာအခက်ကြုံနေရသည်။ ထို့ကြောင့် မိမိ အသက်အန္တရာယ်ကိုပင် မငဲ့ကွက်နိုင်တော့ပဲ မိသားစုဘဝ စားဝတ်နေရေးအတွက် ဈေးဝယ်ရန် မင်းပြားမြို့ နယ် နာဂါရာ (ခ) ဖောက်ဆဲဖာရွာမှ ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုး(၇)ယောက်သည် ဟွန်ဒါစက်တပ်လှေငယ်ဖြင့် ပေါက်တောမြို့နယ်သို့ ဈေးဝယ်ရန် မင်းပြားမှ ၉.၂.၂၀၁၃ နေ့ ညနေ ၅း၀၀နာရီခန့်မှာ ထွက်ခွာ ခဲ့ကြောင်း၊ ယင်းသို့ ထွက်ခွာခဲ့ပြီးနောက် ၁၁.၂.၂၀၁၃ နေ့ မနက် ၄း၀၀ နာရီခန့်တွင် ပေါက်တောမြို့နယ်ရှိ ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးများနေထိုင်သော စစ်ကဲပြင်ကျေးရွာအနီး မရောက်မီ ရခိုင်လူမျိုး များနေထိုင်သော ကြင်ရှင်ရွာမှ ရခိုင်အကြမ်းဖက်လူတစ်စုသည် ယင်းရိုဟင်ဂျာများ၏ လှေငယ်နောက်သို့ မော်ဘုတ်ဖြင့် လိုက်လာပြီး ဓါးများနှင့် ခုတ်ကြောင်း၊ ယင်းသို့ ဓါးဖြင့် လိုက်လံခုတ်မှုကြောင့် ဟွန်ဒါစက်လှေငယ်ပေါ်ရှိ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုး(၇)ယောက်မှ မပြေးနိုင်ဘဲ အကြမ်းဖက်သမားတစ်စု၏ ဖမ်းဆီးခြင်းခံခဲ့ရကြောင်း၊ထိုသို့အဖမ်းခံနေရစဉ်တွင်ပင် ကိုဟာဘီအာလာမ် (ဘ)ဦးမာဘူး (၃၅)နှစ်သည် စွန့်စားပြီး ရေထဲခုန်ဆင်း၍ ထွက်ပြေး လွတ်မြောက်သွားခဲ့သည်။ ကျန်သော ရိုဟင်ဂျာ(၆)ယောက်မှာမူ ရခိုင် အကြမ်းဖက်သမားများ၏ သတ်ဖြတ်မှု ခံလိုက်ရကြောင်းသိရသည်။
ထိုထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာသော ကိုဟာဘီအလာမ်က အနီးအနားရှိ လုံခြုံရေးစစ်တပ်ကို အချိန်မီသတင်းပေးပို့ခဲ့သော်လည်း စစ်တပ်မှအချိန်မီ သွားရောက် အရေးယူမှု မရှိကြောင်းနှင့် အသက်ဘေးမှ လွတ်မြောက်လာသူ ကိုဟာဘီးအာလာမ် ကိုလည်း ယခုအခါ စစ်တပ်မှ ဖမ်းဆီးထားကြောင်းသိရသည်။
ရခိုင်အကြမ်းဖက်သမားများ၏ သတ်ဖြတ်ခြင်းခံရသော ရိုဟင်ဂျာ(၆)ယောက်မှာ
(၁) နာဂါရာရွာမှ နူရုလ်အာမိန့် (ဘ) နူရ်ဆော်လာမ် အသက်(၃၀)၊
(၂) နဂါရွာမှ အဒူကာဒိရ် (ဘ) အီမာန်ဟူဆန် အသက်(၁၈)နှစ်၊
(၃) လက်မရွာမှ အဒူမာဘူ (ဘ) ဒိလ်မိုဟာမာတ် အသက်(၃၀)နှစ်၊
(၄) ဘေလာလ် (ဘ)နော်ဘီဟူဆာန် အသက်(၁၈)နှစ်
(၅)မော်နီအမာတ် (ဘ)ဂျော်လာလ်အမာတ် အသက်(၂၂)နှစ်၊
(၆) ချော်ဘူလ္လာ (ဘ) မိုဟာမာတ်ဟူဆာန် အသက်(၂၈)နှစ်တို့ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
This entry was posted on February 15, 2013, in ပြည်တွင်းသတင်း. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← သမီးရည်းစားပြသနာကြောင့် ဖြစ်ပွားသောလူသတ်မှုကို လူမျိုးစုပြသနာအဖြစ်ဖန်တီးပြီးနယ်မြေရှိ နစကအဖွဲ့က ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးများအား ခြိမ်းခြောက် ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်နေခြင်း	NDPD ပါတီမှ နိုင်ငံရေးရာတာဝန်ခံဦးမိုဟာမတ်နအိမ်၊ မစ္စတာသောမတ်ကင်တာန နှင့်တွေ့ဆုံခြင်းဆွေးနွေးခြင်း … →
လူဖတ်အများဆုံးပို့စ်များ	အမျိုးသားရေး လက္ခဏာ နိုင်ငံသားဖြစ်မှု ဆွေးနွေးပွဲ တွင် NDPD ပါတီမှ ဦးသာအေး၏မေးမြန်းချက်အချို့ တာဝန်ရှိသူမှဖြေကြားနိုင်ခြင်းမရှိ .. မြန်မာတို့အတွက် မြန်မာ့ဆေးမြီးတို	ခွန်ဆာအကြောင်းသိကောင်းစရာ။	နောက်ဆုံးတင် ပို့စ်များ	ထူးဆန်းသောနည်းဖြင့် သေဆုံးခဲ့သည့် ကမ္ဘာကျော်များ
Site Meter	Blog Stats	108,967 hits